NC Mountain Cabin, dị ka New - 18.5 Acres | Achọpụtara nke ọma
NC Mountain Cabin, dị ka New - 18.5 Acres
Home » Ndepụta » NC Mountain Cabin, dị ka New - 18.5 Acres
Sq Na: 2,735
Nnukwu Ụlọ Osisi NC
Ụda ya na-echere na mgbidi ogologo oge ọ hapụchara ya. Ọ nwere ike ịbụ maestro ma enwechaghị oge iji rụọ ọrụ. Ọ na-anọdụ n'elu nnukwu oche na-ebu ụdọ. Na 18.5 acres, ọ dịghị onye nwere ike ịnụ ya. N'ịbụ ndị na-ewepụ echiche ahụ, katọn ahụ na-agbasi mbọ ike, ụrịrị ahụ na-etowanye, osisi na-adanyekwa ma nabata ya ọzọ. Ụlọ a bụ ebe mgbaba ya - ụlọ ụlọ egwu ya, ọ na-adịkarị na ọ ga-abịa ebe a. Ọ na-echefu ebe nsọ na ọ na-eweta ya.
Dị ka nke ọhụrụ, n'ime afọ 10, a na-eleta ya karịa ụbọchị 90. Ụfọdụ n'ime ihe ndị a na-enye aka gụnyere usoro nhazi nke na-emeghe nke nwere okpokoro-okpukpu-ala nile, ọnụ ụzọ French na-emeghe n'elu 1450 square ụkwụ nke oghere okpukpu abụọ, ọkụ ọkụ na gas grill, nnukwu ụlọ nwere ọkụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ, kichin na knnut-walnut, ụlọ ndị na-ekpuchi onwe ha, dị ka ihe ọhụrụ ọkụ gas na ma kichin na nnukwu ụlọ ịsa ahụ, ụlọ nkwonkwo akwa isi nke nwere ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ, ọdọ mmiri, tebụl nke nchekwa na ụlọ ọrụ dum.
N'ịbụ onye a na-ekpo ọkụ na kpamkpam, nnukwu ikuku gravel na-efesa ma na-esi n'elu osisi toro ogologo gaa n'ụlọ nke nọ n'etiti ụlọ ahụ. Ụzọ ụkwụ anọ na-eduga n'ọkụ osisi pine na elu nke ihe onwunwe ahụ na nlele ngosi 360. Ihe mgbakwasị ndị ahụ na-arụ ọrụ dị ala na akwa akwa ndị a kụrụ na perennials guzobere.
Maka onye na-anụ ọkụ n'obi n'èzí, okporo ụzọ maka Okporo Ụzọ Ugwu Black Mountain naanị 4 nkeji. Egwu na ịkụ azụ dị nso na Osimiri Cane ma ọ bụ South Rivers.
Ụlọ nke ugwu NC a dị jụụ bụ naanị 5 nkeji si obodo mara mma nke Burnsville na ụlọ ahịa mara mma na nri dị mma! Ihe ob ula i mere, echela ya Nri na Grit maka ezigbo nri nri ndịda. Ọ bụrụ na ịnweta ohere, buru na egwu na Parkway Playhouse.
Naanị 37 minit si Asheville.
Enwere ike ịzụta ihe ndị a na-eji ihe dị iche iche!
Lelee vidiyo nke Ụlọ Osisi NC a
Ị nwere "Nchọpụta" pụrụ iche iji ree?
Ahịa: $ 525,000
Okwu: 733 Bolens Creek Rd
Koodu mpaghara: 28734
Afọ Wuru: 2008
Ụkwụ Square: 2,735
Ụlọ ịwụ ahụ: 3.5
Ọkara ime ụlọ ịwụ: 1
Nke gara agaỤlọ elu Ụlọ elu nke elu-igwe maka ire ere - Atụmatụ dị mmaIhe na-esoteỤlọ ọrụ USVI St Thomas Home na Magens Bay
Ụlọ elu Ụlọ elu nke elu-igwe maka ire ere - Atụmatụ dị mma
Ụlọ ọrụ USVI St Thomas Home na Magens Bay